Stats Squared dia mandresy amin'ny faran'ny herinandro | Martech Zone
Stats Squared no mandresy amin'ny faran'ny herinandro
Alahady, Novambra 14, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tsy nisy resy ny Faran'ny herinandro fanombohana eto Indianapolis. Izy io dia fanangonana hevitra mahafinaritra mahafinaritra - ny ankamaroan'izy ireo dia efa noraisina amina prototypes matotra. Kudos mandeha any Lorraine Ball ho an'ny fananganana irery an'ity hetsika mahatalanjona ity - ary koa Purdue Research Park - toerana tsy mampino hitana azy io. Ilay nandresy dia Stats Squared, fitaovana iray hanaraha-maso ny fiantraikan'ny Twitter amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny rohy miresaka.
Ny olana, izay efa nanjo ahy voasoratra momba, dia saika manadino ny fifamoivoizana azo avy amin'ny Twitter ny orinasa rehetra satria mijery fotsiny ireo fonenana miresaka momba ny Twitter.com izy ireo. Ny Twitter.com dia eo amin'ny 18% monja amin'ny fivezivezena ao amin'ny Twitter.
Misy vahaolana vitsivitsy - toy ny fampiasana kaody fanentanana rehefa hanafohezana sy hizara ny URL-nao… fa ny rohy izay miasa ihany ianao mizara. Vahaolana iray hafa ny fampiasana Bit.ly Pro… indray, mandrefy rohy fotsiny ihany ianao mizara. Bit.ly Enterprise mamela anao hanara-maso misy ny URL-nao nohafohezina na aiza na aiza ao amin'ny Bit.ly. Saingy tsy ny rehetra no mampiasa Bit.ly.
Sigh… manaraka dia mampiasa fitaovana toy ny Backtweets izay manakaiky ny hahatratra ny rohy tsirairay napetrakao tany, nefa mbola tsy manome statistika an-toerana momba ny isan'ny fitsidihana tonga tao amin'ny tranokalanao.
Ny vahaolana tonga lafatra, mazava ho azy, dia ny mba avelan'ny Twitter hametraka ny kaody fampielezan-kevitr'izy ireo manokana ho an'ireo faritra izay ananany. Amin'izay, isaky ny misy rohy apetrak'iza ao amin'ny fonenanao, dia ampidirina ho azy ny kaody fampielezan-kevitra ary ny Analytics rehetra dia afaka misoratra anarana amin'ny vaovao niavian'ny fitsidihana. Mampihomehy, ny Twitter dia manao an'io amin'ny rohy manokana - toa ireo izay zarain'izy ireo amin'ny mailaka.
Stats efa-joro manantena ny hanampy amin'ny fanalefahana ity olana ity… farafaharatsiny amin'ny fandrefesana ny fiantraikan'ny bitsikao manokana amin'ny tranokalanao manokana. Stats Squared mitambatra amin'ny stream Twitter anao sy Bit.ly mba hanomezana statistika hiverina amin'ny tranokalanao. Na dia toa miasa miaraka amin'i Bit.ly fotsiny io fa tsy Bit.ly Pro… ie. ny URL-tsika diahafohezina ho mkt.gs saingy toa tsy misoratra anarana izy io.
Manana lisitra faniriana aho Stats efa-joro:
Tsanganana havanana raikitra izay agregate, manome ireo Tweet ambony sy ny tahan'ny click-through (CTRs) manaraka isan'andro, herinandro sy volana.
Ny fahaizana mahita ny lalan'ny fizarana, miainga amin'ny sioka voalohany ka hatrany amin'ireo olona izay ni-retweet, ary impiry notsindriana ny rohy.
Ny fahaizana mahita ireo olona izay RT indrindra ny rohinao ary, raha azo atao, ny fifamoivoizana nentin'izy ireo taminao.
Nahafaly ny teo amin'ny tontolon'ny mpitsara ny fanombohana nanomboka tamin'ny hevitra ka hatramin'ny famonoana tao anatin'ny faran'ny herinandro iray. Ny Stats Squared dia misy fanadiovana trano hatao ary misy fivoarana fanampiny, saingy fototra lehibe tsy azo ivalozana. Milamina tsara izy, mahasarika maso, ary efa miseho mandeha tsara.
Fomba 5 lehibe hahatongavana ho spammer tsy nahy